Dr Cusmaan Dufle oo mar kale loo doortay Senator ka tirsan Aqalka Sare – Kalfadhi
Dr Cusmaan Dufle ayaa loo doortay Senator ka tirsan Aqalka Sare
Xildhibaannada baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa caawa mar kale Dr Cusmaan Maxamuud Dufle u doortay in uu kamid noqdo Senatarada Aqalka Sare ee dalka, kaddib doorashadii caawa ka dhacday magaalada Jowhar.
Mudane Dufle oo afartii sannadood ee la soo dhaafay ahaa Senator ayaa wareegii labaad helay 68 cod, halka musharraxii la tartamayay Raage Xasan Cusmaan uu isagana helay 28 cod.
Ambassador Maxamuud Tarzan oo kamid ahaa tartanka ayaa wareegii koowaad ku haray, kaddib markii uu helay 19 cod.
Xildhibaannada ayaa ilaa iyo hadda doortay afar Senator, waxaana dhiman afar kale oo filayo in maalmaha soo socda la doortay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo qaabilay Safiirka Sweden ee Soomaaliya